1. Famaritana ny mombamomba anao
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fitsidihanao ny tranonkala sy ny loharano azonao. Manangona fampahalalana marobe toy ny adiresy IP, système d'exploitation ary browser izay ampiasaina ny Cookie.
Miankina amin'ny pejin-tranonkala notsidihina, ny pejy sasany dia mety misy endrika manangona vaovao momba anao, toa ny anaranao, nomeraon-kaody paositra, adiresy mailaka, sns.
2. Ny politikan'ny cookie
Cookies dia ampiasaina hanatsarana ny traikefan'ny tranokalanao mifototra amin'ny fifandraisanao taloha tamin'ny tranokala. Ny Cookie dia alaina ary arovan'ny mpitety Internet rehefa miditra amin'ny Internet ny tranonkala voalohany. Ny cookie voatahiry dia ampiasaina amin'ny fitsidihana manaraka hanatsarana ny fijerena tranonkala.
Ny Cookie dia azo sakanana na voafafa amin'ny tranga toy izany izay tsy ekenao ny fananana Cookie. Na izany aza, amin'ny fanaovana izany dia mety tsy mavesatra ny tranokala, na mety tsy mandeha tsara ny asan'ny tranonkala sasany, noho ny fanakanana ny Cookie.
Fanamarihana: Amin'izao fotoana izao, tsy misy Cookies ampiasaina amin'ny tranokalanay manangona vaovao izay azo ampiasaina hamantarana anao manokana.
Ahoana ny fomba hitantanana sy hamafana Cookies
Ny cookies dia azo sakanana na voafafa amin'ny alàlan'ny fikirakirana "Setup" (na "Fitaovana"). Safidy iray ny manaiky na mandà ny Cookies rehetra. Ny safidy faharoa dia ny manaiky cookies manokana avy amin'ny tranonkala manokana. Ny browser dia azo apetraka hahitsy mba hahafahany mampandre anao isaky ny mandray Cookie ianao. Ny fitantanana ny Cookies sy ny fomba famafana azy ireo dia miovaova amin'ny fizahana manokana. Miovaova ny browser rehetra amin'izao fotoana izao. Raha te hanamarina ny fomba fitantanan'ny browser-nao ny cookies, azafady ampiasao ny asan'ny fanampiana ao amin'ny browser-nao.